Nyanzvi muNyaya dzezveHupfumi Yozeya Kuparurwa kweMashandisirwo eMari neRBZ
Doctorr John Mangudya
Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Doctor John Mangudya nemusi weChitatu vakaparura hurongwa hwavo hwekutanga hwekushandiswa kwemari kana kuti Monetary Policy Statement kubva vaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe zvava manikidzwa kusiya basa muna Mbudzi gore rapera.
Dr Mangudya vakatiwo Zimbabwe iri kuyedza kuti iwane chikwereti chemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti us$1,5 billion kubva kubhanga re African Export-Import Bank (Afreximbank) mukuyedza kuvandudza hupfumi hwenyika.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vachidzidzisa paDevry University kuColumbus muAmerica, Dr Elliot Masocha vanoti VaMangudya nevakuru muhurumende vanofanira kuzadzikisa zvavanenge vavimbisa sezvo muromo usingazarirwe nerwizi.
Vakatiwo huwandu hwezvinhu zviri kutengeswa kunze hwati wandei. VaMangudya vakatiwo varimi vanenge vave kukwanisa kushandisa magwaro avakapihwa nehurumende e99 year lease sechibatiso kuti vapihwe zvikwereti.